धरानमा हैसियतविहीन बनेको हो समाजवादी?
धरान । राई लिम्बुहरुकै बाहुल्यता भएको सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा समाजवादी पार्टी धेरै नै कमजोर स्थितिमा रहेको देखिएको छ । गत मंसिर १४ गतेको उपनिर्वाचनको परिणामले समाजवादीको कमजोर स्थिति बाहिर ल्याइदिएको हो ।
उपनिर्वाचनमा समाजवादीबाट मेयरका लागि चुनाव लडेका गजेन्द्रबहादुर लिम्बुले केवल ७५५ मत ल्याए ।
उनले भन्दा बढी मत कुमार लिङदेन नेतृत्वको पार्टी संघीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चले पाएको छ । मञ्चका उम्मेदवार अम्बरबहादुर लिम्बुले ११३१ मत ल्याए ।
यस पटकको निर्वाचनमा मञ्चले आफूलाई तेस्रो स्थानमा उभ्याएको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि समाजवादीका नेता कार्यकर्तामा निराशा छाएको छ । समाजवादीका सच्चा कार्यकर्ताहरुले पार्टीले अब बेलैमा आफ्नाे शैली र रणनीति बदल्नुपर्ने सुझब दिएका छन् ।
२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरमबाट मेयरका उम्मेदवार बनेका पारस राईले ५१८१ मत ल्याएका थिए ।
दुई वर्षपछिको उपनिर्वाचनमा एक हजार मत कटाउन सकेन । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वका नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालबीच एकता भई समाजवादी पार्टी बनिसकेको अहिलेको परिस्थितिमा मत झन घट्नुले कार्यकर्ताहरुलाई निराशावादी बनाइदिएको छ ।
समाजवादीका वरिष्ठ नेता अशोक राईले आफ्नाे निर्वाचन क्षेत्र बनाउन चाहेको धरानमै पार्टीको स्थिति धेरै नै कमजोर देखिएपछि कार्यकर्ताहरु चिन्तित बनेका छन् । तेस्र्रो राजनीतिक धार र उन्नत विचार बोकेको भए पनि पार्टी बन्दैन कि ? भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ, उनीहरुमा ।
हुन त धरानमा नेकपाका उम्मेदवार प्रकाश राई पनि जिल परेका छन्, अहिलेको मत परिणाम देखेर ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा तत्कालिन एमालेका उम्मेदवार तारा सुब्बाले २०९७५ मत ल्याएर विजय हासिल गरेका थिए । धरान उपमहानगरपालिकाको कूल मतदाता संंख्या ७९२९० हो ।
२०७४ सालमा तत्कालिन माओवादीका उम्मेदवार अइन्द्र विक्रम बेघाले १११८० मत ल्याएका थिए । एमाले र माओवादी एकता भइसकेको अहिलेको अवस्थामा नेकपाका उम्मेदवार प्रकाश राईले स्वतः जित्नुपर्ने हो । ३२ हजार भन्दा बढी भोट ल्याएर जित्नुपर्ने थियो उनले ।
तर, यसपटक धरानमा २७९५ मत बढी ल्याएर नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार तिलक राईले विजय हासिल गरे । उनको यो सामान्य विजय होइन, ऐतिहासिक विजय हो । ६० वर्षदेखि कब्जा जमाएर बसेको कम्युनिष्टको लालकिल्ला तोडेर उनले इतिहास बनाइदिए धरानमा ।
पार्टी एकतापछि पनि आफ्नाे लालकिल्ला गुमाउँदै पराजित हुनुपरेपछि अहिले नेकपाका कार्यकर्ताहरुको चुरीफुरी पनि तुरिएको छ ।
नेकपाका लागि भन्दा समाजवादीका लागि धरान उपमहानगरपालिकामा चुनाव जित्नु पहाड बनेको छ ।
पहिलेभन्दा मत घटेपछि यस क्षेत्रको निर्वाचन, पार्टी संगठन र शैलीबारे गम्भीर समिक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
Amar Tumyahang December 3, 2019 At 8:17 pm
Strategically जित्ने र statistically हार्ने नेता र कार्यकता भएसी पार्टीको हालत हुने नै यही हो । यसखाले राजनीति गर्ने नेता तथा कार्यकर्ताले एउटा कुरा बुझ्नु पर्छ कि राजनीतिक ठिहीमा आगो ताप्न पठाएका भोटरहरु कहिल्यै फेरि ठिही भएको ठाउँमा अर्थात् पर्म गर्न पठाउने पुरानो पार्टीमा फर्कने छैनन्, यो सामान्य मानवीय मनोविज्ञानको कुरा हो जो सर्वजनीन छ ।
Abishek mabo December 3, 2019 At 9:31 pm
पाटी भित्रको राज्यको शासकीय र नामकरण अझेइ पनि दोधार भएको कारण ले पनि पाटी भित्रका समस्या हो । पाटी भित्रको केही नेता लाई सुनसरी लिम्बुवान सुन्न पनि चाहन्दैन ॥ अनी अन्य पाटीलाई फाइदा हुन्छ । भएको हो ॥
Purna kurumbang December 4, 2019 At 5:06 am
२०७६ को मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन भयो र कुनै कुनै ठाऊँमा परिणाम पनि अत्यन्तै रोचक आयो, खुशी लाग्यो । किन कि निर्वाचनको दौडनमा कुनै अप्रिय घटना घट्न पाएन त्यो नै , शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न भयो भनेर सम्झिन्नु पर्दछ । नेपाली जनताले स्थायी सरकार चाहेका थियो, त्यो स्थापित भएकोछ ।
जनताका लागि ठूलो उपलब्धि भनेकै त्यही हो । प्रतिस्पर्धामा जित–हार हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले परिणामलाई सहज रूपमा लिएको छु ।